Falanqaynta Goobta Hay'adda Semalt Digital
Khabiirada Semalt waxay bixiyaan seddex ikhtiyaar oo olole SEO ah oo loogu talagalay macaamiisha — AutoSEO, FullSEO, iyo ololeyaal Falanqayn Olola kasta ka hor, khabiirkayaga SEO wuxuu si qoto dheer u eegi doonaa ilaha internetka ee loogu talagalay heerarka u hoggaansanaanta qaabeynta websaydhada iyo falanqaynta SEO.
Ololahayaga 'AutoSEO Ololuhu' wuxuu bixiyaa falanqayn rasmi ah oo ku saabsan dukaanka internetka ee macaamilka ee kobcinta mashiinka raadinta. Olole FullSEO ah ayaa ku lug leh falanqayn balaadhan oo kala duwan si looga caawiyo meheraddu inay kobciso joogitaankeeda internetka muddo gaaban gudaheeda. Halka, Ololaha Falanqaynta wuxuu bixiyaa falanqayn hordhac ah oo ku saabsan websaydhka macmiilka.
Intii lagu gudajiray Ololaha Falanqaynta, waxaan dib u eegis ku sameyneynaa websaydhka macmiilka waxaanan la shaqeynaa shirkaddaada si loo dammaanad qaado guusha internetka. Inta lagu guda jiro Ololaha Falanqaynta, falanqayntayada SEO-ga waxay la shaqeyn doontaa shirkaddaada tallaabo kasta oo jidka ah. Waxaan bixinnaa warbixin dhameystiran oo dib u eegis ku sameyneysa howlaha muhiimka ah ee websaydhkaaga, iyo sidoo kale talooyin si aad ugu qaadatid goobtaada goobta Google TOP.
Waa maxay aragtida websaydhku?
Muuqaalka websaydhadu waa habka loo helo degel laga helo mashiinka raadinta ugu weyn sida Google. Muuqaalka websaydhka waxaa lagu go'aamiyaa xaddiga ugu badan ee ilaha ka jira goobta oo horseeda weydiimaha muhiimka ah; bandhigyada hadda jira ee go'aaminaya tirada soo bandhigyada goobta gudahooda ee mashiinka raadinta la siiyay; iyo xogta guud ee ka dhex jirta websaydhka ku lugta leh in lagu meeleeyo mashiinka raadinta.
Soo noqnoqoshada weydiimaha mashiinka raadinta waxaa lagu go'aamiyaa sida had iyo jeer adeegsadayaashu u weydiiyaan su'aal gaar ah mashiinka baarista. Tan waxaa lagu xisaabiyaa tirada muujinta bil gudaheed. Mowqifka SERP waa sadarka bog gaar ah oo websaydh ku dhaca marka lagu qiimeeyo su'aashaas. Iskuxirka booska wuxuu kuxiranyahay waxa loogu yeero "cufnaanta feejignaanta", oo tusaya xariiqa bogga soo bandhigaya. Xaddigan waxaa loo xisaabiyaa si loo go'aamiyo tayada iskuxirka
Khabiirada SEO ee Semalt ayaa ka caawin kara shabakadaada inay kordhiyaan aragtidooda mashiinka raadinta. Marka aan sameyneyno falanqaynta FullSEO ee goob, waxaan dooranaa fasiraadda saxda ah ee dib-u-fiirinta ee u baahan in la sameeyo. Dukaamada internetka qaarkood, goobtooda ayaa muhiim u ah inay gacan ka geysato kordhinta aragtidooda websaydh. Markaa, waxaan ku sheegnay goobtooda barta ay ku taal. Halka, maaddooyinka kale, Semantics-ka ay ka muhiimsan yihiin. Marka, waxaan qaadnaa qaab qoto dheer oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo matoorkooda raadinta. Mar haddii tan la hubiyo, khabiirada Semalt waxay hubin doonaan inay qaadaan habka ugu wanaagsan ee gacan ka geysan kara kordhinta tirada ereyada muhiimka ah ee ku jira websaydhka si loo hubiyo inay guuleysteen.
Ku saabsan weydiimaha
Markaad la shaqeyneyso SEO, waxaa jira seddex aqoon isweydaarsi muhiim ah:
Soo noqnoqoshada: Tani waxay muujineysaa imisa jeer bishii booqdele ayaa gala weedh gaar ah baaraha raadinta. Markasta oo ay badato, dadka badidoodu waxay helayaan ilo intarnetka ah waa SERP sare.
Beddelka waa boqolkiiba inta tirada soo booqdayaasha websaydhada ee ku kacay talaabo muhiim ah tiradooda guud.
Su'aalaha tartanku waxay macnaheedu yihiin kharashyada loo baahan doono si loogu helo TOP eraygan muhiimka ah.
Furaha ereyada iyo soo noqnoqoshada
Weydiimaha adeegsadaha badanaa waxaa loo qaybiyaa 3 kooxood:
Weydiimaha aadka u tiro badan - kuwa ugu caansan, oo ay isticmaalaan in kabadan 5,000 oo qof bil kasta. Markuu caannimada badan yahay, markaa kor u qaadista muhiimka ahi waa mid wax ku ool ah, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan, maadaama tartan badani jiro.
Weydiimaha-dhexdhexaadka-dhexdhexaad ah - caan ah, laakiin ka yar kuwa caadiga ah. Tilmaanta soo noqnoqoshada: 1,000-5,000 isticmaale bishii.
Weydiimaha isdaba-joogga ah - kii ugu yaraa (ilaa 1000 bishii).
Falanqaynta iyo xulashada jumladaha muhiimka ah aad ayey muhiim ugu yihiin samaynta websaydhka asaasiga Semantic. Aasaaska Semantic wuxuu muujinayaa inta booqdeyaasha bog la bixiyay loo baahan yahay si loo geliyo TOP. Tani waxay si toos ah u saamaysaa diyaarinta nuxurka. Khubaradeena SEO ayaa adeegsada algorithm la xaqiijiyay inay ka caawiyaan kor u qaadida websaydhada. Bogga ugu weyn wuxuu ku wajahan yahay weydiimaha-soo noqnoqda. Qaybaha ugu waaweyni waa isweydaarsiga dhex-dhexaadka ah iyo hoosaadyada ayaa lagu bartilmaameedsanayaa weydiimaha-hooseeya.
Tallaabooyinka hubinta barta
Markaad hubinayso goobta kobcinta, khubarada Semalt waxay aqoonsadaan marxaladaha soo socda:
Falanqaynta qoraalka qoraalka ah ee SEO;
falanqaynta taraafikada goobta;
Falanqaynta SEO ee tartamayaasha;
falanqaynta goobta farsamada ee SEO;
falanqaynta xiriirada dibedda ee goobta;
falanqaynta qaab dhismeedka Semantic ee websaydhka.
Falanqeynta qoraalka qoraalka SEO
Inta lagu jiro falanqaynta qoraalka qoraalka ee SEO, khubaradeenna ayaa go'aamiya muhiimada ay leedahay qoraalka bogga ee ku saleysan ereyada muhiimka ah ee loo adeegsado kobcinta goobta ee makiinadaha raadinta. Falanqaynta qoraalka ee weydiimaha raadinta ayaa si taxaddar leh loo soo xushay ka hor intaanan bilaabin dallacsiinta nuxurka. Waxaan ku bilaabeynaa annaga oo sameynayna falanqeyn gaar ah in aan isbarbar dhigno bogga xayeysiinta ama bogga oo dhan iyo natiijooyinka kale ee raadinta TOP. Intaas kadib, waxaan isbarbar dhigaa dhererka qoraalka iyo tirada erayada ee goobaha tartamayaasha leh aragti fog. Tani waxay u oggolaaneysaa aqoonyahannadeenna inay ogaadaan muddada qoraal kasta uu ahaanayo. In kasta oo, ma jirto hab lagu dammaanad qaado natiijooyinka raadinta TOP, adoo kaliya hagaajinaya tilmaamayaasha dhexdhexaadka ah waxaan sare u qaadi karnaa shebekada websaydh ee 'SEO'.
Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta aasaasiga websaydhka aasaasiga ah, waxaan si wanaagsan u fahmi karnaa inta jeer ee ereyada muhiimka ah ay ka muuqdaan qoraalka. Haddii nambarkani uusan gaarin heerkii loo qorsheeyay, qoraalka waa in lagu qoraa. Qofna ma hagaajin karo qoraalka qofka ikhtiyaarkiisa ah isagoo aan falanqayn raadinta ugu sareysa. Mashiinka baarista wuxuu iftiiminayaa goobaha TOP-10 iyadoo la raacayo shuruudaha qaarkood waana in markasta tixgelinta la siiyaa inta wax la qorayo. Adiga oo la shaqeynaya qoraallada bog isla markaana isbarbar dhigaya waxyaabaha ka kooban tartamayaasha ayaa kuu oggolaanaya inaad hubiso muhiimadda bog la siiyay isla markaana aad ku sameysid falanqaynta SEO-ga su'aalaha muhiimka ah. Waxaas oo dhami waxay u oggolaanayaan khabiirkayaga inuu helo macluumaadka ku saabsan sida loo hagaajiyo darajaynta bogga ee natiijooyinka raadinta Google iyo kordhinta aragga.
Falanqaynta taraafikada bogga
Falanqaynta taraafikada bogga ayaa kuu oggolaaneysa inaad ogaato sida taraafikada galaya goobta loo qaybiyo, iyo sidoo kale ilaha taraafikada. Inta lagu jiro wejigan, taraafikada websaydhada tartamaya ayaa la falanqeeyay si si wanaagsan loogu fahmo suuqa. Dib-u-dhiska noocan ah, adeegyo gaar ah ayaa loo isticmaalaa. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan soo saarno macluumaadka soo socda:
tirada soo booqdayaasha gaarka ah;
tirada aragti boggii fadhi kasta;
sicirka soo boodinta;
ilaha taraafikada (toos, xawilaad, dabiici ah, lacag bixin, iyo kuwa bulsheed).
Falanqaynta taraafikada goobta ayaa ah hab lagu baaro taraafikada tartamayaasha.
Falanqaynta SEO ee tartamayaasha
In kasta oo qabashada falanqaynta SEO-ga ee websaydhka tartame ay tahay hawl weyn, waxay kuu oggolaaneysaa inaad gadaal ka fiiriso muuqaallada tartanka si aad u ogaato:
habab lagu habeeyo waxyaabaha;
imisa jeer iyo inta jeer ee ay iskuxirayaashu la xiriiraan tartamayaasha;
waxa tartamayaasha ay leeyihiin oo aan ku jirin dukaankaaga internetka;
khaladaadka ka jira boggaga tartamayaasha.
Isbarbardhiga boggaaga iyo tartamayaasha ayaa kuu oggolaanaya inaad fahanto sida loo hagaajiyo darajada guud ee boggaaga. Khabiirka Semalt wuxuu baari doonaa oo la soconayaa goobaha u tartamaya si uu wax badan uga barto suuqaaga wanaagsan isla markaana uu u habeeyo macluumaadkaas si loo wanaajiyo natiijooyinkaaga raadinta.
Falanqaynta farsamada ee websaydhada
Falanqaynta farsamada ee websaydhada ayaa ku jirta qaybta falanqaynta SEO qoto dheer. Samaynta falanqaynta farsamada waxay u baahan tahay waayo-aragnimo badan oo ku saabsan xayeysiinta websaydhka, kaas oo xirfadyahannada Semalt leeyihiin. Qaybta ugu adag ee falanqaynta farsamada waa tarjumaadda xogta. Falanqaynteena farsamada waxay daboolaysaa qaybaha soo socda:
Falanqaynta tirakoobka websaydhku waxay muujineysaa imisa bog ayaa ku lug leh raadinta Google. Haddii mashiinka raadinta uu arko boggaaga 50 jeer, oo tartamayaasha ay leeyihiin 300 bog, degelkaaga ma yeelan doono meel sare natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee ereyada-ereyada aadka u sarreeya.
Falanqaynta muuqaalka goobta waxay muujineysaa dhammaan furayaasha ereyga bog u baahan yahay inuu ka qaato hoggaanka matoorada raadinta. Tani waa aalad awood leh oo si dhakhso leh loogu helo ereyo cusub oo lagu kobcinayo laguna helo bogagga ugu caansan ee tartamayaasha.
Falanqaynta ereyga muhiimka ah ee goobta waxaa ku jira aruurinta macluumaadka laxiriira goobta tartamayaasha, intaas ka dib oo su'aalaha muhiimka ah si taxadar leh loo falanqeeyo, loo baaro siminaarooyinka, isku urursiga, iyo hirgelinta.
Falanqaynta culeyska barta ayaa cabiraya xawaaraha culayska goobta, ka dib marka la barbar dhigo goobta laga soo bandhigo TOP. Hawshani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka hesho bogag dhibaato leh bartaada.
Falanqaynta laxirista goobta waxay hubineysaa iskuxirka gudaha ee bogga bogga. Robot-ka raadinta wuxuu ogaan karaa bogag kale oo bogag ah haddii bogag kale ay leeyihiin ilo la mid ah ama bogag xiriir la leh. Xaaladaha qaarkood, isku xirka kartida leh ayaa ku filan in lagu hormariyo goob loo maro baaritaanka TOP.
Falanqaynta bogga ugu weyn ee barta ayaa loo baahan yahay marka dalacsiinta lagu sameeyo weydiimaha aadka u sareeya. Sababta labaad ee qiimeynta faahfaahsan ee bogga weyn waa in si fiican loo fahmo sida miisaanka bogagga loogu kala qaybiyo tartamayaashaada. Sababta saddexaad ayaa ah in la helo isfaham guud oo ka dhexeeya natiijooyinka ugu sarreeya iyo bogaggooda ugu waaweyn oo ay istiraatiijiyaddooda ku meel mariyaan bakhaarkaaga internetka.
Isbarbardhiga calaamadaha meta ee goobta tartanku waxay lagama maarmaan u tahay koritaanka. Tan waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo gurguurta oo ay u oggolaaneyso, iyo waxyaabo kale, in lagu ogaado khaladaadka ka jira bartaada, waxyaabaha aan la tilmaamayn, jidgooyo khaldan, iyo xiriiriye jaban. Haddii mid uu falanqeeyo calaamadaha meta ee bartilmaameedka iyo habka ugu saxsan ayaa loo heli karaa weydiimaha muhiimka ah ee soo noqnoqda.
Falanqaynta xiriirada dibedda ee goobta
Markaan falanqeyneyno xiriiriyeyaasha dibedda ee bog, waxaan helnaa liiska dhammaan barta Bogagga iyo bogagga kugu xirtay shabakadaada, iyo sidoo kale xirxirayaasha muddo go'an. Falanqayntaan waxaa loo soo bandhigayaa qaab nooc warbixin miis ah iyo jaantus kordhinta tirada tixraaca. Xidhiidhada dibedda ah iyo dib-u-xirida ayaa ah mawduuc laga wada hadlay "SEO-ga" mawduucyada ka dhexeeya SEOs. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira fikir ah inaysan jirin isku xirnaansho iskuxiran oo caawin doona haddii aysan jirin qaab dhismeedka semantic dhexe iyo xeerarka aasaasiga ah ee SEO aan la raacin.
Falanqaynta qaab dhismeedka Semantic ee goobta
Tani waxay ku lug leedahay talaabooyinka soo socda:
sameynta xudunta aasaaska;
isbarbardhiga natiijooyinka iyo qaab-dhismeedka hadda jira.
Markaad falanqeyso qaab dhismeedka Semantic ee websaydh, waxaad u soo qaadan doontaa dhammaan bogaggaaga si habaysan. Qaab-dhismeedka Semantic waa amarrada daabacaadda buugga macluumaadka ee dareenka u leh isticmaalaha iyo matoorada raadinta. Hadda, furayaasha furaha ayaa la geliyaa qaab dhismeedka Semantic ee goob. Si loo fuliyo falanqaynta qaab dhismeedka Semantic ee goob tayo leh, falanqaynta qaabdhismeedka goobta, falanqaynta aasaaska Semantic, iyo falanqaynta Semantics guud ahaan waa in la sameeyaa.